Mahofisi Ekutakura Maitiro | RayHaber | raillynews
mushaGENERALHofisi Yekutakura Services
23 / 05 / 2020 GENERAL, Tsamba yekutanga
basa rekufambisa remahofisi
Chitoro chehofisi Kana zvasvika kumasevhisi, tinogona kutaura kuti boka remakambani ekufambisa rakachinja ichi kuita chikamu nekupa iri basa. Kuzivikanwa, kwave kuwanikwa pamwe nekuwedzerwa kweimba kuenda kune zvekufambisa mabasa, ikozvino kwapararira kunzvimbo yekufambisa yehofisi. Mazuva ano makambani ekufambisa atanga kushandira makambani emakambani mumunda uyu.
Saka Hofisi Inofambisa Basa Inoenda Sei?
Sezvimwe nebasa rega rega zvekufambisa zvehofisi Iko kune zvakare maitiro mumabasa avo. Ichowo chiitiko chakafanana nekutakura pamba. Nekudaro, maitiro aya akatowedzera kuwanda uye semakambani ekufambisa, isu tinofanirwa kubata nechinzvimbo, kwete munhu. Mune izvi, izvo zvekutenga uye zvekutonga zvikamu zvemakambani anoita nekumiririra kambani. Sezvo Çolakoğulları mhuri, isu tinogara tichishanda nesimba kupa hutano hwekufambisa basa kune vatengi vedu.
Çolakoğulları chekufambisa, inova imwe yekambani dzekare zvekufambisa dzinopinda mune yekufambisa chikamu chehofisi; inogara ichikupa mhando, yakachengeteka sevhisi nekukurumidza. makambani emakambani ari munzvimbo dzakawanda dzeTurkey, kunyanya mune yakataurwa pamusoro apa nezve chinhu ichi 3 kusarudza kambani yedu inoita chinhu chikuru.
Sezvo Çolakoğulları kambani yekufambisa; zvekufambisa zvehofisi Isu tinogaro kupa timu yakanakisa, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvese zvekushandisa kune vatengi vedu mumabasa avo. Tiri kushanda zvakanyatsonaka mune imwe yakakosha nyaya, hunyanzvi mabasa. Chikonzero chikuru chekuti tine hanya nezvenyaya iyi ndechekuti; haisi yekukonzera chero kushamisika kana kusamira munzira yekufambisa kwehofisi. Kubatsira kukuru kwekambani yedu panguva yekusarudza; Izvo zvine ruzivo. Nekuda kweizvozvo, timu yezvemitambo yekutonga mumakambani haigaroita mabasa ekufambisa. Naizvozvo, kutanga nemakambani ekufambisa ayo anoziva bhizinesi; ronga uye kuronga nekuona izvo zvinoitika izvo zvisinga tadze ivo kune dambudziko panguva yekufambisa kwemahofisi
Inotungamira Kambani muHofisi Inofambisa Makambani
Kambani yedu ndiyo inonyanya kufarirwa uye yakavimbika kambani yekufambisa pakati pemakambani ese ekufambisa emahofisi. Kubva 1970 yakaona kuwanda kwakabatana nemakambani mukati meTurkey yose. Kuti uwane mareferenzi ekambani yedu uye nhoroondo yekambani yedu https://www.ofistasimaciligi.com.tr unogona kupinda kukero yedu. Ruzivo rwakadzama rwunosanganisirwa.
Njanji inokwira-kumhanya kutakura zvinhu pakati peFrance neGreat Britain…
Kushamwaridzana kwekutakura kuchava nzira yekufambisa yeramangwana
AkçagÃ¶ze - Baspasar Nar Variant Supervision Services Auction Supervision Services hal
Rail mitoro Association kutama kwavo chipfuro kuna Turkey
New Term ne IM CIM Transport Document Demiryolu muTereji Freight Transportation
Nhamba dzeSvondo dzakawanda dzomugwagwa dzhamba dzakatarwa
Nyika kutakura inzwi muNorth America inoderera muna March
Motokari inotakura kuNorth America yakawedzera muna April
North America motokari inotakura inotakura zvakanyanya muna August
China yekutakura motokari inowanda inowedzera ne2,8 muzana munaNovember
Nhamba yekufambisa kwekutya kweUS kuwedzera munaJanuary
Tender Notice: Office Container Ichatengwa
Metro inofamba dzimba uye mahofisi emahofisi eMurisheye
Hofisi yeOfisi Inoshandiswa Kuvandudzwa